China Durable Waterprood Seadling Heat Mat|Archibald Kura fekitori nevagadziri |Archibald
Inoshanda zvakanaka kune chirimwa chechirimo chinotanga, munguva yechando, kana chero nguva zvidyarwa zvako zvinoda kuwedzera kupisa.
Archibald's mutengi-yekutanga kuzvipira zvinoreva kuti tiri pano kugadzirisa chero dambudziko uye ive nechokwadi chekuti wagutsikana.
IP67 kusamira kwemvura zvinoreva kuti unogona kukwesha meti yakachena kana kupukuta yakarasika pasina kunetseka.
Dhizaini inoshanda nesimba: inoshandisa makumi maviri Watts chete.
Yakagadzirwa neYazvino Tech- Professional Mhedzisiro
Archibald's upgraded heat firimu inovimbisa kupisa kweyunifomu uye kusimba kusingakundiki.
Innovative far-infrared light wave, zvichiita kuti nzvimbo yekupisa ipfave.
Iyo yakawanda-layer yekuvaka inoita kuti iyi inopisa meti irege kupisa kana kupisa midzi yako yakapfava kana yasara pamaawa makumi maviri nemana pazuva.
The heat conduction ratio inogona kusvika pamusoro pe90%.
Vashandisi vanotaura pedyo ne100% budiriro yekumera, cloning uye midzi kusimudzira.
Inoshanda zvakakwana kune chirimwa chechirimo chinotanga, munguva yechando kana chero nguva zvidyarwa zvako zvinoda kuwedzera kupisa.
Zvakare yakakura pakubika kombucha kana mamwe mapurojekiti ekuvirisa DIY - anoputira midziyo zvakanaka.
Yakakurudzirwa kushandiswa neArchibald Thermostat Controller uye Humidity Dome kune zvakanakisa mhedzisiro (zvese zvinotengeswa zvakasiyana).
Zvakapfuura: Mechinical Timer Plug|Archibald
Zvinotevera: 640W 6 bars Kurisa magetsi ane 301B Chips|Archibald Kura